ग्लोबल वार्मिंगको बिरूद्ध शहरी वन पार्कहरूको फाइदा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
ग्लोबल वार्मिंग बिरूद्ध शहरी वन पार्कहरूको फाइदा
ग्लोबल वार्मिंगसँग लड्न मद्दत गर्न असंख्य कार्यहरू छन्। मुख्य एउटा वातावरणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नु हो। तर हामी वायुमण्डलमा भएका ग्यासहरू के गर्छौं?
वनहरूले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाको क्रममा वायुमण्डलबाट CO2 अवशोषित गर्छन्। जहाँसम्म, बढेको मानव विस्तार र शहरीकरणका कारण हामीसँग ज for्गलको लागि ठाउँ छैन। हामी कसरी ग्लोबल वार्मिंग रोक्न मद्दत गर्न सक्छौं?
1 सहरी वनस्पतिको सकारात्मक प्रभाव
2 द्रुत शहरी वन योजना
3 पानी बिना रोपण प्रविधि
सहरी वनस्पतिको सकारात्मक प्रभाव
शहरहरूमा, स्थानीय योजना छ एक आवश्यक उपकरण खाली ठाउँहरू वितरण गर्न र कार्यक्षमता र निश्चित भूमि प्रयोगहरू निर्दिष्ट गर्न। राम्रो स्थानिक योजनामा, शहरी क्षेत्रमा पार्क र रूखहरू अनुपस्थित हुन सक्दैन। सहरी बोटबिरुवाले सहरहरूको वातावरणमा धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ।
एक सकारात्मक प्रभाव भनेको सहरी जनसंख्याको लागि मनोरञ्जन ठाउँहरू प्रदान गर्नु हो जहाँ साना व्यक्तिहरू प्रकृतिसँग परिचित हुन सक्छन् र दिउँसो बाहिरै खर्च गर्छन्, हाम्रो वर्तमान टेक्नोलोजी को लागी एक धेरै स्वस्थ बानी।
अर्को प्रभाव बोटबिरुवाबाट मौसमको अवस्था सुधार गर्न हो वायु गतिमा फिल्टर र ब्रेकको रूपमा काम गर्दछ र यसले यति धेरै धुलो कणहरू तान्न अनुमति दिँदैन, यसैले माटोको क्षति उत्पादन गर्दछ।
शहरी बोटहरू पनि यस रूपमा कार्य गर्दछन् आवाज अवशोषक यातायात, यातायात जाम, उच्च ध्वनि प्रदूषण दर, आदि। तिनीहरू शोरका मुख्य स्रोत हुन् र वनस्पतिले ध्वनिक स्क्रिनको रूपमा काम गर्दछ जसरी राजमार्गहरूमा प्यानलहरूले यसको नजिकका घरहरूका लागि गर्दछन्।
अन्तमा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ किनकि बोटबिरुवाहरूले मोटर सवारीको धुवाँ अवशोषित गर्छन् र एसएमओजीको प्रदूषणकारी प्रभावलाई कम गर्दछन् (शहरबाट टाढाबाट हेर्दा बिहान धुवाँ जस्तो देखिन्छ)।
द्रुत शहरी वन योजना
यो बढावा दिने बारेमा हो Autochthonous प्रजातिहरूको साथ सहरी वन पार्कहरूको रोपण। यी प्रविधिको लागि सिंचाई आवश्यक पर्दैन र नगरपालिका प्रशासनहरूको लागि पानी र मर्मतमा धेरै खर्च बचत गर्दछ।
यस परियोजना मा चित्रित गरिएको छ म्याड्रिडमा कासा एन्सेन्डिडा। परियोजनाको उद्देश्य लाइफ + कार्यक्रम द्वारा सह-वित्त पोषित हो र यो सहरी जंगलहरूको कार्यान्वयन, सहभागिता र व्यवस्थापनमा राम्रो अभ्यासहरूको माध्यमबाट शहरहरूमा अधिक हरियो ठाउँहरू सृजना गर्ने बारेमा हो।
अध्ययन गरिएको तथ्या .्कका अनुसार, स्पेनका शहरहरूको नगरपालिका सहरी क्षेत्र सतह क्षेत्र द्वारा हरियो अन्तरिक्षमा समर्पित क्षेत्रहरू हुन् केवल २ र%% बीचमा। जे होस्, ए Anglo्ग्लो-सेक्सन क्षेत्रमा तिनीहरूले समर्पण गरे लगभग %०% क्षेत्र हरी ठाउँहरूमा।
शहरी वनको अवधारणा भूमध्यसागरको संसार भन्दा ए the्ग्लो-स्याक्सन संसारमा बढी विकसित छ।
पानी बिना रोपण प्रविधि
नगरपालिका प्रशासनका लागि लागत बचत गर्न र खडेरीमा पानी बचाउन हरियो ठाउँको कार्यान्वयनको योजना प्रस्तावित गरिएको छ। सिँचाइको आवश्यकता पर्दैन। बोटबिरुवाको तातो प्रतिरोध जाँच गर्न प्रयोग गरिएका प्रविधिहरूमध्ये माइक्रोरिझाको बिरुवा रोपण हो जुन फg्गुनले वनस्पतिलाई पानी लिन र अझ जोसिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
पानी सञ्चय गर्ने विधि पनि कार्यान्वयन गरिनेछ। यी पोलीमरहरू हुन् जुन रूखहरूको जरामा सक्षम हुन सक्षम छन् वर्षा हुँदा ओस राख्नुहोस्।
सहरी ज creating्गल सिर्जनाको फाइदा भनेको बगैंचामा सम्मानका साथ माइक्रोक्लीमेट्सको सिर्जना मात्र होईन, तर पनि हावा र भुइँ सफा गर्न मद्दत गर्नुहोस्, र रमाईलो समाजको सर्तमा। रूखविना पार्क भन्दा मानिसहरू वनको आनन्द लिन्छन्।
त्यहाँ अन्य फाइदाहरू र लाभहरू छन्, वातावरणीय भन्दा बाहेक, सामाजिक र आर्थिक जसरी उनीहरू काँटाई को उपयोग गर्नुहोस् वनको बायोमास उर्जा उत्पादन गर्न वा कम्पोस्टको लागि सक्षम हुन।
यो पहललाई द्रुत शहरी फारेस्टाइन वेबसाइटमा परामर्श लिन सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » ग्लोबल वार्मिंग बिरूद्ध शहरी वन पार्कहरूको फाइदा
भूमध्यसागरीय जलवायु परिवर्तनको लागि धेरै जोखिममा छ